Man United, Juventus, Man City & Real Madrid Oo War Fiican Ka Helay Xidiga Ay Ku Dagaalamayaan Ee Kalidou Koulibaly. - Gool24.Net
Kooxaha Manchester United, Manchester City, Juventus iyo Real Madrid ayaa war fiican ka helay xidiga ay ku dagaalamayaan ee Kalidou Koulibaly kaas oo ka hadlay mustaqbalkiisa kooxda Napoli.
Kalidou Koulibaly iyo xulka qarankiisa Senegal ayaa xalay guul ka gaadhay Tanzania waxaana wax laga waydiiyay mustaqbalkiisa isaga oo shaki galiyay haddii uu baaqi ku sii ahaan doono Napoli.
Kalidou Koulibaly ayaa ka mid ah ciyaartoyda xagaagan sida wayn loo doonayo inkasta oo ay kooxdiisa Napoli lacag waali ah dul dhigtay balse afar kooxood oo waa wayn ayaa isha ku haya xaalada xidiga reer Senegal.
Kalidou Koulibaly oo kadib guushii xulkiisa Senegal ee kulankii Talyania mustaqbalkiisa wax laga waydiiyay ayaa yidhi: “Anigu ma ogi (Haddii aan Napoli sii joogayo), sidaas ayaan filayaa. Laakiin waxaa waajib igu ah in aan ciyaaro tartanka koobka qaramada Afrika ee AFCON kadib waxaan ku laaban doonaa Napoli”.
Kalidou Koulibaly ayaa shaki galiyay in uu sii joogi doono kooxdiisa Napoli wuxuuna qirtay in isaga uu qof kastaaba ka hadlayo balse waxa uu adkaystay in uu hadda diirada saarayo waajibaadka xulkiisa Senegal.
Kalidou Koulibaly oo arintan ka hadlaya ayaa yidhi: “Qof kastaaba waxa uu ka hadlayaa wax aniga igu saabsan, laakiin waxa kaliya ee aan ka hadlayaa waa Senegal, sababtoo ah taas ayaa maanta ujeedadayda ah waxaanan doonayaa in aan wax wayn la gaadho Senegal”.
Kalidou Koulibaly ayaa waayihiisa ciyaareed ka soo bilaabay kooxda Metz wuxuuna kulankiisii ugu horeeyay saftay August 2010 kii wuxuuna laba sano kadib ku biiray kooxda reer Belgium ee Genk.
Laakiin difaaca birta ee xulka Senegal ee Kalidou Koulibaly ayaa sanadkii 2014 kii lacag 6.5 milyan gini kaliya ugu soo biiray kooxdiisa hadda ee Napoli kuwaas oo hadda ku qiimaynaya lacag ka badan 150 milyan.
Kalidou Koulibaly ayaa doonaya in hadda uu diirada saaro waajibaadka xulkiisa Senegal ee koobka qaramada Afrika balse uu kadib u furan yahay in uu mustaqbalkiisa ka fiirsan doono maadaama oo ay kooxo waa wayni si wayn u doonayaan.